Triproof Lighting, Waterproof Chiedza, akatungamirira nemhute yechigarire - Ini
Home kushandisa michina mudziyo
Waterproof akatungamirira Light
Tri-Zvinoratidza akatungamirira Lighting
Akatungamirira Ceiling Lighting
T8 Fluoresent Tri-Zvinoratidza Light
Akatungamirira Batten Light
Ningbo Ini Electronic TECHNOLOGY CO., LTD rave commited kuita electrionic uye akatungamirira chiedza zvigadzirwa OEM / ODM mabasa. Aiming pfupiro chiedza mhinduro kuti wemagetsi chikumbiro musi pamasikiro, mukugadzira uye neungano. Tine mazana oversea chiedza wezvokutengeserana kambani, hombe youinjiniya chirongwa, Government chiedza chirongwa uye equipments kupa nyanzvi unhu okuvimba basa. With zvinobatsira akangwara musha, kambani yedu vakaronga kupinda R & D magadzirirwo uye kugadzirwa akangwara musha zvigadzirwa. Quality ndiyo inokosha vekwedu, isu committeed pakuve yepamusoro, mutengo-inoshanda, akangwara musha mutengi mugadziri.
Nyika inofadza pamusoro akatungamirira okuvimba
Ngaaiswe pachako vakafuridzirwa zvakasiyana chaizvo zvakaita nyaya
Innovative uye chipa chiedza pamwe akatungamirira
Inofadza kunovhengana yokuunganidza zvitarisiko, Stylish filament michina, akanaka chiedza uye simba kunyatsoshanda
IP66 Round DZAKATEVEDZANA
IP66 denderedzwa DZAKATEVEDZANA 2
Smart Life , Smart vaIri Remote Controller , Smart Home , Smart Home Security , Smart Security & Protection Products , Smart Home Gateway , All Products